Gịnị bụ nri DASH na kedu uru ya | Bezzia
Kedu ihe nri DASH na kedụ uru ya
Nke Torres | 22/10/2021 14:00 | Nkwere maka enyemaka
Emepụtara nri DASH na XNUMX na United States. Kpọmkwem na Ụlọ Ọrụ Ahụike na United States na ebumnuche nke ịmepụta ụdị nri kwesịrị ekwesị maka ndị nwere ọbara mgbali elu. Ya mere, ọ bụrụgodị na ọ gụnyere okwu nri, ọ bụ ụdị iri nri nke nwere ihe akaebe sayensị ma bụrụ nke zuru oke.
Nke a bụ ihe dị mkpa iburu n'uche, ebe ọ bụ na ọ bụghị nri na-agwụ ike, ma ọ bụ ọrụ ebube, ma ọ bụ kwupụta na ị ga-efunahụ ọtụtụ kilos n'ime obere oge. Nri DASH bụ ụdị iri nri dị mma, nke na mgbakwunye na inwe ike ifelata, ị ga-enweta ọtụtụ uru ahụike ọ na-eweta. Chọpụta ihe ụdị nri a gụnyere na otu esi eme ya n'ụlọ.
1 Kedu ihe bụ nri DASH?
1.1 Ọ bụ maka onye ọ bụla?
Kedu ihe bụ nri DASH?
Okwu DASH sitere na okwu okwu a na-akpọ "Dietary Approaches to Stop Hypertension", nke na-akọwa nri lekwasịrị anya na iwepụ ọbara mgbali elu. Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, site n'iri nri kwesịrị ekwesị, ọ ga -ekwe omume iwepụ nsogbu dịka ọbara mgbali elu na ọbara mgbali elu, na -enweghị mkpa ị consumeụ ọgwụ maka ya. N'ebumnobi ahụ, e kere nri a dabere na oriri nri dịka ndị a:
Ezi oriri nke ihe oriri dị ka: mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, mmiri ara ehi amịpụtara, na ihe ndị na-esighị ike.
A na -etinye oriri ọka zuru oke: dị ka akwụkwọ nri dị iche iche, mkpụrụ osisi, mmanụ ihe oriri na mkpụrụ osisi, karịsịa mkpụrụ.
Iri anụ na-esighị ike na azụ. Na-ahọrọ mgbe niile iberibe nwere obere abụba.
Iri nnu na ngwaahịa nwere ya belatara ntakịrị. Na mgbakwunye, ngwaahịa ndị dị ka ihe ọṅụṅụ na-esi ísì ụtọ, sweets na ultra-processed kwesịrị ibelata.
Wepu ma ọ bụ belata oriri nke ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya na opekempe.
Nri DASH dabere na ibelata oriri nnu, ka mụbaa nke mineral ndị ọzọ dị ka potassium, magnesium ma ọ bụ calcium. Ihe kpatara mineral ndị a na-emebi sodium bụ na nke mbụ na-arụ ọrụ nke ọma na njikwa ọbara mgbali elu. Yabụ ụdị nri a gụnyere iri nri ndị bara ọgaranya na magnesium, calcium na potassium, yana ndị ọzọ bara ụba na eriri. Ebe ọ bụ na mgbe ejikọtara, ha na-arụkọ ọrụ ọnụ ma belata ọbara mgbali.
Ọ bụ maka onye ọ bụla?
Ọ bụ ezie na na mbụ e mere nri DASH maka ndị ọrịa nwere nsogbu ọbara mgbali elu, ọ bụ ụdị nri dị mma nke na enwere ike ime ya onye ọ bụla. Nke ukwuu maka ndị na-enweghị ụdị ọ bụla nke pathology na ha na-achọ nanị imeziwanye ihe oriri na-edozi ahụ ma si otú ahụ ahụ ike. Dịkwa ka a na-atụ aro ya maka ndị ọrịa ndị ọzọ nwere ọrịa dịka ọrịa shuga.
Na nkenke, mgbanwe na nri nke ị nwere ike imeziwanye ahụike gị n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nri DASH dị ka ụzọ iri nri, ị ga-agbaso ụkpụrụ nduzi ndị a.
Belata nnu nri na kichin, ọ dịghị ihe karịrị otu teaspoon kọfị kwa ụbọchị.
Wepu ultra-processed, nri nnu, esiri esi ya na ụtọ.
Were na kacha nta 3 iberibe mkpụrụ osisi otu ụbọchịa, ọ bụ ezie na mgbe ọ bụla o kwere omume, ọ bụ ihe amamihe dị na ya inwe 5 dum iberibe.
Rie akwụkwọ nri kwa ụbọchị na nri ọ bụla, ọkacha mma na salad.
Zere isi nri na cubes bouillon nwere nnukwu sodium. Kama, jiri ngwa nri ịgbakwunye ụtọ n'ụzọ ka mma.
Iji esi nri, họrọ nhọrọ kacha mfe ma gbanarị nri e ghere eghe, bred na nke nwere abụba.
Na-aṅụ mmiri zuru oke, n'etiti otu lita na ọkara na lita abụọ kwa ụbọchị. Ị nwere ike ịchịkwa ya ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị gụọ ya site na iko mmiri, nke ga-abụ ihe dịka 8. Infusions na-agụkwa.
I nwere ike achịcha ugboro abụọ n'ụbọchị, ọkacha mma nke ahụ bụ achịcha ọka wit dum na enweghị nnu.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, nri DASH na-achịkwa oriri nke nnu na ngwaahịa ndị na-emebi njikwa ọbara mgbali elu. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị, na mgbakwunye na ịgbaso nri dị otú a, ị ga-agakwuru dọkịta gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite nri gị na -enweghị nrịanrịa, ị nwere ike megharịa nri a ka ọ dị gị mkpa. N'ihi na nri dị mma yana ezi ahụike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Nkwere maka enyemaka » Kedu ihe nri DASH na kedụ uru ya
Tebụl ọdọ mmiri - gịnị kpatara na ị gaghị enwe mmasị na ha n'ụlọ?
Uwe a na -agba n'oge nke Mango tụrụ anyị n'anya